Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment ब'ला'त्कारपछि ह'त्या, भागरथी भट्टले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं : डिआईजी सुवेदी - Pnpkhabar.com
ब’ला’त्कारपछि ह’त्या, भागरथी भट्टले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं : डिआईजी सुवेदी
काठमाडौं, २७ माघ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उत्तमकुमार सुवेदीले बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ कि १७ वर्षकी भागरथी भट्टको ब’ला’त्कारपछि ह’त्या प्रकरणका दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्ने र कारबाही गरिने विश्वास दिलाएका छन् ।
(हिजो) सोमबार नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै डिआईजी सुवेदीले यो घट्नामा नेपाल प्रहरी सफल हुने र छिट्टै दोषीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले आफूहरुले अहिले घट्नाबारे गम्भीर अनुशन्धान गरिराखेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :-
भागरथी भट्टको हत्या प्रकरण कहाँ पुग्यो ? ब’ला’त्कारपछि ह’त्या गरिएको कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?
हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौं । र, म आफूपनि घट्नास्थलकै आसपासमा बसेर टिमसहित अनुसन्धान गरिराखेको छु । विगतमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका जवानहरुको संलग्नतामा हामीहरुले अनुसन्धान गरिराखेका छौं । र, त्यसमा हामीलाई स्थानियवासी र जनप्रतिनिधिहरुले पनि साथ दिइरहनुभएको छ । अनुसन्धानका सबै पाटाहरु, जुन हामीले गर्नुपर्ने हो ती सबै हामीले गरिराखेका छौं । र, यसमा देखिएका प्रगतिहरु हामी चाँडैनै सार्वजनिक गर्छौं ।
अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त ? तपाईँहरु यो घट्नाको दोषी अथवा अ’पराधीलाई पक्रन कहिले सफल हुनुहुन्छ ?
छैन । छैन । डाक्टर साहेवले निकाल्नु भएको छैन् ।
पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएलगत्तै ब’ला’त्कारपछि ह’त्या भएको भनिएको छ, तपाईँले के पाउनुभयो त सूचना ?
अरुतिर के-के आयो बाहिर भन्ने कुराको त मलाई त्यति जानकारी भएन । तर, हाम्रो अनुसन्धा प्रक्रिया र हाम्रो टिमसँग खटिनुभएको डाक्टर साहेवहरुबाट बाहिर आएको छैन् । सायद आजसम्म दिनुहुन्छ होला ।
अ’पराधीलाई पक्रनको लागि यहाँहरूले कुन प्रविधि अपनाइरहनु भएको छ ?
बाहिर के-के आयो भन्ने कुराको म जिम्मेवारी दिन्नँ । हामीले बाहिर भनेका पनि छैनौं । र, केही पनि गरेका छैनौं । ती कुरा के हुन् ? छुटै अनुसन्धान होला । तर, हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया द्रुत गतिमा गएको छ । अनुसन्धानमा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अपनएर अगाडि बढिराखेका छौं ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको ब’ला’त्कारपछि ह’त्या भयो, अहिलेसम्म राज्यले अ’पराधीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् । निर्मलाको जस्तै यो घटना पनि दोहोरिने हो कि ? भनेर अहिले चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ, तपाईहरु यो घट्नाका अ’पराधीलाई पक्रन सक्छौं भन्न सक्नुहुन्छ ?
मृ’त्तकको परिवारको चिन्ता र चासो छ नि त ? फेरी निर्मला पन्तको जस्तै हुने हो कि भनेर ? यसपटक तपाईँहरु दोषीलाई कारबाही वा कानूनी दायरामा ल्याउन चुक्नुहुन्न ? नि ?
यो कुराले कुनै माने राख्दैन् । जहाँ भएपनि हामी ल्याएर आउछौं । भागरथी भट्टले न्याय पाउनुपर्छ, र अ’पराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ, यसमा तपाईँहरुलाई सफलता मिलोस भन्न चाहन्छु। हामीलाई दबाब त छँदैछ, तर दबाबसागै जिम्मेवारीबोध गर्दै यस घट्नाका दोषीलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं । र, कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।